2009-2011 : Andramena 75 000 T naondran’ny HAT! -
AccueilRaharaham-pirenena2009-2011 : Andramena 75 000 T naondran’ny HAT!
2009-2011 : Andramena 75 000 T naondran’ny HAT!
20/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Roa taona monja taorian’ny niakaran-dRajoelina teo amin’ny fitondrana dia andramena milanja 75 000 T no voaondrana tany Sina. Nambaran’ny tambazotra iraisam-pirenena « Traffic » tao amin’ny RFI mantsy fa mahatratra 150 000 T ny andramena naondrana an-tsokosoko tany Sina nanomboka ny taona 2009 ka ny 50%-n’izany dia teo anelanelan’ny taona 2009 sy 2011. Dia sahy milaza ve ity mpanongam-panjakana ity fa tsy tafiditra ao anatin’izany fanondranana izany velively ny tenany? Teo am-pelatanan-dRajoelina avokoa ny rafitra rehetra nandritra izany taona 2009-2011 izany ary nametraka herim-pamoretana manokana ho azy ny tenany hanara-maso sy hifehy ny Nosy iray manontolo raha tsy hiresaka afa-tsy ny FIS sy ny DST.
Tsy maintsy ho avy ny fotoana hivoahan’ireo harena sy kaonty miafinan’ny mpitondra HAT indrindra ity lehiben’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009 ity izay milaza ankehitriny fa tsy misy mahasakana azy tsy hilatsaka hofidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Manodidina ny 25 dolara ny iray kilao tamin’ny andramena tamin’izany fotoana izany; 25 000 dolara araka izany ny iray taonina, dia ataovy ny kajy amin’ireo andramena milanja 75 000 T ireo fa mety hosahirana hatramin’ny “machine à calculer” amin’ny halavan’ny tarehimarika!
Raha nentina nanatsarana ny fiainam-bahoaka, nananganana fotodrafitrasa ho an’ny firenena izany vola be izany mety tsy nampaninona ihany. Nambaran’ny MAPAR nandritra ireny raharaha Soamahamanina ireny mantsy hoe nanasoavana firenena hono ny vola azon’ny HAT tamin’ny fifampiraharahana rehetra nandritra ny Tetezamita. Ireo hopitaly manara-penitra sy ny kianjan’ny Maki moa no tian’izy ireo ambara kanefa mazava tsara fa ny ampahany kely tamin’ilay vola mitentina 1 800 miliara azo tamin’ny famarotana ny vy any Soalala tamin’ny orinasa Wisco no nampiasaina tamin’izany. Azo atao tsara ny manao fitsirihana (audit) momba ireny hopitaly manara-penitra hanaporofoana izany.
Midika izany fa tsy avelan’ireo fikambanana iraisam-pirenena amin’izao mihitsy ireny trafika sy fanondranana an-tsokosoko ireny na dia sarotra aza ny fanangonana ny vaovao momba izany. Efa aty amin’ny taona 2017 vao nivoaka ny tatitra mikasika ny fanondranana andramena nandritra ny fitondrana HAT. 75 000 T ao anatin’ny roa taona monja!